CNS chirwere vachangoberekwa: zvinokonzera, zviratidzo, marapirwo, migumisiro
A achangoberekwa haisati yanyatsosvika vakaumba nhengo uye hurongwa, uye kugumiswa inotungamirwa anotora dzimwe nguva. Zviri nedanho kukura mwana kuripowo kuumbwa uye dzinokura ake nechepakati tsinga. Grudnichka tsinga Anobatsira waidzora chakaipa upenyu hwake munyika.
Mune zvimwe zviitiko, zvingava uonekwe neonatal CNS lesion kuti kunoitika manjemanje kazhinji. tsinga kudzvinyirira kungaita migumisiro uye kusiya mwana akaremara.
Zvakakurukurwa sechivako tsinga yacho achangoberekwa
Baby rakasiyana akura kwete chete zvokunze kusiyana, asiwo nemamiriro muviri, sezvo hurongwa hwose uye nhengo hadzisati zvakazara asi kuumbwa. Munguva paumbwe uropi mwana iziviswe unconditional hunenge. Pakarepo pashure pokuberekwa, vakawedzera kwevari zvinhu kuti waidzora mahormone anokonzera kushanda zvomudumbu hurongwa. Panguva iyoyo, zvose receptors vakatobatana yakatanga zvakanaka.
The zvinokonzera CNS chirwere
Zvinokonzera uye migumisiro CNS vachangoberekwa anogona kuva akasiyana zvikuru. Huru zvinhu kukonzera atadze kushanda zvakanaka kuti tsinga vari:
nokushaiwa okisijeni, kana hypoxia;
nokuvhiringidzirwa dzose muviri;
zvirwere, izvo akatambura amai vanepamuviri panguva yepamuviri.
Kushaikwa okisijeni, kana hypoxia, zvauya kune mumwe pamuviri mukadzi ngozi runyararo, iri zvirwere, panguva kusvuta, yapfuura pamuviri. All ichi anoputsa mukuru riparadzirwe uyewo ropa okisijeni saturation, uye fetus anogamuchira okisijeni pamwechete ramai ropa.
Mumwe zvinoita inotisvitsa kukundwa tsinga, kuberekwa makuvaro inokurukurwa sezvo chero kunotevera kungamutsawo kutyorwa kuibvisa kwaizotevera kukura nechepakati tsinga.
Nokuvhiringidzirwa romuzvarirwo muviri kunoitika pamusana chete nezvikonzero zvakafanana kushaya mhepo. By dysmetabolic zvirwere uyewo anotungamirira kupindwa muropa nezvinodhaka uye udhakwa, amai vanepamuviri. Mukuwedzera, sei tsinga vangava kugamuchira mushonga kuti simba zvinodhaka.
Critical kuti mudumbu kunogona kuva zvirwere vakatakura pamusoro mai nezveramangwana munguva mwana-kubereka. Pakati Zvirwere izvi kuziva herpes uye rubella. Uyezve, zviri chero pathogenic tupukanana uye utachiona kungakonzera kusingarapiki kunaka pezvakaitwa mumuviri mwana. Zvikurukuru, huta matambudziko maitiro kuitika rokusamhanyira vacheche.
Nguva kuyerera pathologies of CNS
Syndrome kukundwa uye kokumanikidza tsinga integrates dzinoverengeka pathological inoti zvichiitika utero, panguva basa, uye ari maawa zvoupenyu grudnichka rokutanga. Kunyange zvazvo paine zvakawanda predisposing kuti chirwere excrete zvinhu 3 chete yakareba, anoti:
In neimwe nguva, musimboti huta kukuvara hurongwa vachangoberekwa ane siyana zvekuchipatara kuratidzwa. Uyezve, vana vanogona kuva mubatanidzwa syndromes siyana. The kwokuomerwa mumwe runoyerera chirwere kuona kwokuomerwa kukuvara tsinga.
The chenjera weboka chirwere
Chenjera kumwedzi kunogara kwemwedzi. kuyerera wayo zvakananga novimba mwero kukuvara. In nyoro maronda vakachengeta Palpebral, vakawedzera excitability tsinga hunenge, vachidedera chirebvu, unopinza kusingadzoreki muzvidimbu kufamba, hope zvirwere. Mwana kazhinji kuchemera pasina chikonzero.
With avhareji kwokuomerwa vasanyanye gwenya basa uye tsandanyama matauriro, hunenge, kwakaderera, kunyanya yakayamwa. mamiriro ichi mwana zvinofanira yazivisa. Pakazopera mwedzi wokutanga upenyu huripo zviratidzo anogona kutsiviwa hyperexcitability, anenge translucent ruvara rweganda, kakawanda regurgitation uye bloating. Kazhinji mwana akaonekwa - hydrocephalic chirwere dzinoratidzwa nokukurumidza kuwedzera musoro sekamufarenzi, BP, fontanelle kuzvimba, chinoshamisa ziso masangano.
Kana wakakura zvikuru kazhinji pakoma. kuomesa Izvi zvinoda hwomwana vari muchipatara pasi pokudzora chiremba.
CNS chirwere vachangoberekwa paaiita yavaipora nguva ane syndromes:
kunonoka kukura mupfungwa.
In refu kutyora tsandanyama matauriro kazhinji pane anonoka kwepfungwa pakukura uye kuvapo kusagadzikana injini mashandiro, izvo kunoratidzwa involuntary kufamba, kushatiriswa rutapudzo pakati dzemuviri ari hunde, chiso, maoko nemakumbo uye meso. Kanoita kufamba mwana kuipa chinangwa.
Pamusangano kunonoka pfungwa pakukura grudnichok rinotanga zvikuru paya bata yavo musoro, gara, famba, zvinokambaira. Uyewo, haana zvakanaka zvaanoita chiso chake, akaderedza kufarira matoyi, simba kuchema, kunonotsa kwaita Kutaurisa uye Gulen. Kwakadaro sokunonoka kukura mupfungwa wemwana vanofanira kuona vabereki.
Rinenge gore pachena CNS vachangoberekwa, kunyange zvazvo huru zviratidzo chirwere vari zvishoma kupera. Mugumisiro inoyerera zvokurwara anova:
Somugumisiro, zvingava palsy uye mwana akaremara.
Perinatal CNS kukuvara vachangoberekwa - a seboka izwi kunoreva kutyora kushanda kwouropi. kutyorwa kwakadaro kuitika mune antenatal, intrapartum uye neonatal nguva.
Antenatal inotanga kubva 28th vhiki fetus, uye inoguma pashure pokuberekwa. Intrapartum zvinosanganisira kukurukura nguva kubvira pakutanga aibuda basa uye kusvikira mwana aberekwa. Neonatal kumwedzi kunoitika pashure pokuberekwa uye kunoratidzwa ne kwadzakabva grudnichka kuti dzezvakatipoteredza ezvinhu.
Chikonzero chikuru nei pane perinatal CNS kukuvara vachangoberekwa, ndiye hypoxia, iyo anovandudza apo aibuda vanoshorwa pamuviri, kuberekwa kukuvara, asphyxia, zvirwere zviri mudumbu.
Chikonzero uropi inokurukurwa kune intrauterine utachiona, uye kuberekwa makuvaro. Uyezve, zvingava musana kukuvara tambo kuti kunoitika apo pachiitiko chinotyisa pakusununguka.
Zviratidzo kuvimba kunonyanya nguva chirwere uye ukuru yokukuvara nekuomarara. Mumwedzi wokutanga pashure mwana anozvarwa pane rikwanise Nguva chirwere inozivikanwa nechepakati tsinga mwoyo uye hyperexcitability. Zvishoma nezvishoma achidzokera kwomuzvarirwo tsandanyama inzwi. Mwero rutapudzo zvikurukuru kunobva pakuti kukuvara.
Nechirwere maperembudzi vachiri muchipatara chiremba-neonatologist. Mazvikokota achiitisa misoro kuzviongorora mwana uye pachishandiswa huripo pakati diagnoses. Mushure zvinoerera kubva kuchipatara mwana pasi pokudzora chiremba wetsinga. Kuti uwane chaiwo diagnoses kuitwa Hardware nemiedzo.
Treatment yaifanira pakutanga maawa azvarwa uye kuongorora chirwere. Mugore chenjera marapiro rinoitwa kukurairisai muchipatara pasi kuramba pokudzora vanachiremba. Kana hosha nounyoro kosi, kurapwa kunogona kuitwa pamba pasi pokudzora chiremba wetsinga.
The kupora nguva rinoitwa comprehensively, uye panguva imwecheteyo, pamwe navanachiremba nemishonga inoshandiswa panyama kurapa nzira dzakadai physiotherapy, kushambira, Chinyorwa kurapa, kukwizwa, kutaura marapirwo makirasi. Chinangwa chikuru nzira izvi ndizvo rakasungwa mupfungwa uye kwomuviri maererano nemakore-ukama kuchinja.
Sezvo kazhinji hypoxia chinokurwadzai kukuvara tsinga, kuti mai ose pamuviri vanofanira kuziva kuti inotungamirira hypoxia uye sei anogona kudziviswa. Vabereki vakawanda vanonetseka chii hypoxic-ischemic nechepakati huta kukuvara hurongwa vachangoberekwa. Kusimba zvikuru zviratidzo chirwere kunoenderana ya hypoxia mwana utero.
Kana pfupi-rokuti hypoxia, mitemo haisi kuipa, ngozi zvikuru okisijeni nenzara, akaramba kwenguva refu. Pakadaro, kunogona kuitika dzichipfekeka kusagadzikana uropi kana kunyange rufu masero etsinga. Kudzivisa kusagadzikana tsinga iri vacheche mukadzi panguva mukubereka vana vanofanira ngadziteerere chaizvo mamiriro utano hwake. Kana uchifungidzira kuvapo kwezvirwere vanotsamwisa fetus hypoxia, hwobva kuona chiremba kuti kurapwa. Kuziva chii - hypoxic-ischemic nechepakati tsinga kukuvara vachangoberekwa, uye chii vari zviratidzo chirwere, anogona kutadzisa panowanikwa chirwere panguva mangwanani kurapwa.
Forms uye zviratidzo chirwere chiitiko
CNS chirwere vachangoberekwa munogona dzakasiyana siyana, zvinoti:
Munyoro chimiro iri ichazivikanwa noku kunyanyisa excitability tsinga hunenge, simba tsandanyama matauriro inogona kuchengetwa mumazuva okutanga muupenyu. Unogona kugamuchira uchifamba strabismus kana chakaipa, akadzungaira kwebasa eyeballs. Papera kanguva, pangava vachidedera chirebvu uye muzvidimbu uyewo mutizi kufamba.
Average chimiro ane zviratidzo zvakadai kwokushayiwa Manzwiro ari mwana, murombo tsandanyama matauriro, rutivi rwomuviri. Tinganetseka nezvipusha, kunyanya nehanya, involuntary kufamba kwemaziso.
Zvakakomba chimiro kunoratidzwa kwazvo vanotaura kuti tsinga wayo zvishoma nezvishoma nokudzvinyirirwa. Rinooneka muchimiro nezvipusha, renal kukundikana, zvirwere zviri ura, kumwoyo, kufema hurongwa.
Sezvo migumisiro kuvadza nechepakati tsinga inogona kunyatsonanga nengozi, saka zvakakosha rokuongorora zvirwere. vana vanorwara vanoita uncharacteristically nokuda vachangoberekwa zvikurukuru chikonzero ichi kuva nechokwadi kuona chiremba kana zviratidzo yokutanga chirwere nokuti kuongorora uye kutevera-up kurapwa.
Pakutanga, chiremba anoongorora achangoberekwa, asi izvi kazhinji hazvina kukwana. Kuchangotanga nokufungirana kuvapo zvokurwara chiremba ibasa computed tomography, Ultrasound Diagnostics, uyewo X-ray. Nokuda zvakaoma zvokuongorora anogona kukurumidza kuziva dambudziko uye zvinopa kurapwa vachishandisa nzira ano.
Kuitisa nokurapa CNS
Vamwe pezvakaitwa pathological mumuviri panguva nechityu, ari azara kungava kusingarapiki, saka rinoda zvokukurumidzira matanho uye nenguva kurapwa. Vacheche vanofanira kubatwa mwedzi yokutanga muupenyu, sezvo iyi iri muviri grudnichka anokwanisa zvizere kudzorera ukama uropi mabasa.
Abnormalities nechepakati tsinga vari kugadziriswa tichibatsirwa kurapwa. Chinosanganisira zvinodhaka kuti kuvandudza tsinga sero kudya kunovaka. Mishonga inotokonya kweropa zvinoshandiswa munguva kurapwa. Kushandisa zvinodhaka kunogona kuderedza kana kuwedzera tsandanyama matauriro.
Kuvana vanorwara vakakwanisa kupora nokukurumidza, akabatana mishonga kurapa akashandisa osteopathic kurapa uye physiotherapy. Nokuti rokuchinjwa kosi kunoratidzwa masaja, electrophoresis, reflexology nezvimwe nzira dzakawanda.
Pashure Kudzikamiswa vomwana wacho nemamiriro Munhu purogiramu mukutsigira zvakaoma kurapa uye anoita nguva richiona kwokufara mwana. Mugore rose, isu kuongorora simba mamiriro mwana vakasarudzwa dzimwe nzira kurapwa, zvikaita kuti mangwanani apore uye kusimudzira zvaidiwa unyanzvi uye hunenge.
Kudzivisa panowanikwa chakakomba uye ngozi chirwere, zvinokosha kuita kudzivisa grudnichka CNS maronda. Kuti aite izvi, vanachiremba vanoti kuronga pamuviri pachine, mune nenguva netsika kupfuura zvinodiwa bvunzo uye kurega miitiro yakaipa. Kana zvakakodzera, antiviral kurapwa rinoitwa, akaita zvakafanira zvose majekiseni kuti, uyewo normalize hormone background.
Kana CNS grudnichka kukunda asi chakaitika, zvakakosha kubatsira richangoberekwa maawa hwake pakutanga uye vanoita kuramba richiona ari mwana.
Migumisiro uye matambudziko anoitika CNS maronda achangoberekwa kunogona dzakakomba zvikuru, ngozi dzoutano uye upenyu, uye vari kwakunoitwa muchimiro:
kwazvo marudzi kukura kwepfungwa;
zvakakomba gwenya kukura, palsy;
The nenguva kuonekwa zvirwere uye zvakanaka zvidzidzo mushonga vanokwanisa kubatsira kubvisa zvinetso zvakakomba zvoutano uye kudzivirira matambudziko.
Coleitis: kurapwa, mifananidzo, zviratidzo uye zvinokonzera
Information chitsamba: chii mota uye sei kurapa kubva mukati
Ketone miviri iri weti - zvichibvira zvinokonzera
Sei involuntarily vachidzungudza ruoko?
Mabatirwo nemaronda mudumbu
Duodenitis chirwere - chii? Zviratidzo, Zvinokukonzera uye Treatment doudenita
American vari kuyaruka: zvepfungwa uye zvinonakidza zvinhu
Kutyora peripheral kweropa: thrombosis uye embolism
"Reebok Iziton" - bhutsu kuti anobatsira kuderedza uremu uye kuwana wakanaka mufananidzo
Iyo nyika vanobatanidzwa Kishi: purogiramu inodzidzisa kuti vasingazivi
Vanhu Russian North. Small vanhu North uye kuFar East
Mitemo chokufambisa dzakawanda
"Ndiyeukei": vatambi, creators, nyaya
Art. 105 yemutemo weCriminal Code of Russian Federation nemashoko
Athena: Kukosha Name: Description uye kwakabva zita
Ramenskaya Dental Clinic: wongororo uye kero
Palestinian bhabha Style bvudzi renyu ayo vatengi moto